Be fitiavana sy malemy fanahy
"Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy" - Heb. 13:1.
Tsy misy mambran'ny fianakaviana T, . afaka miolonolona samirery (...) Raha vonton'ny fitiavan'i Kristy izy dia haneho fanajana sy fahalemem-panahy ary fitiavana manoloana ny fihetsehampon'ny hafa. Ary hampita fihetsehampo feno fahalemem-panahy sy fankasitrahana ary fifaliana amin'ireo manodidina azy izy, amin'ny alalan'ny fitiavana asehony. Hiseho amin'ny asany fa miaina ho an'i Jesôsy izy, ary isan'andro izy dia mianatra eo an-tongony ary mandray ny fahazavany sy ny fiadanany. — YI, 22 Jona 1893 .
Tsy ampy handresena ny fahasiahana sy ny fitsarana mandratra ary ny teny mahery ny fikolokoloana fatratra indrindra ny fomba ivelany. Tsy ho tanteraka ny tena fanadiovana ny toetra raha mbola ny izaho no omena ny toerana ambony indrindra. Tsy maintsy mitoetra ao am-po ny fitiavana. Ny Kristianina marina dia hanovo ny antony manosika ny asany avy amin'ny fitiavany lalina ny Tompony. Ny fitiavany an'i Kristy no faka ipoiran'ny fitiavany ny rahalahiny, izay fitiavana tsy mitady tambiny.
Amin'izay zavatra rehetra katsahina sy ankamamiana ary kolokoloina dia tsy misy sarobidy eo imason'Andriamanitra mihoatra noho ny fo madio sy ny toetra vontom-pankasitrahana sy fiadanany.
Raha toa ka mitoetra ao am-po ny firindran'ny fahamarinana sy ny fitiavana avy amin' Andriamanitra, dia hamiratra eo amin'ny teny sy ny asa izany (...) Tokony hitoetra ao am-po ny toe-tsain'ny fahafoizan-tena. Manome fahasoavana, toetra tsara, fahamendrehana ary fahafoizan-tena ho an'izay manana azy ny fitiavana. Manazava ny endrika sy manalefaka ny feo ny fitiavana, ary manadio sy manandratra ny maha-olona manontolo. Mampifanaraka ny olombelona sy Andriamanitra ny fitiavana satria toe-tsain'ny lanitra izany. — AH, 425,426
Aza avela hitoetra ao am-po ny fitiavan-tena ka hanjary hanan-toerana ao an-tokantrano (...) Hanjaka ao an-tokantrano ny tena fahalalam-pomba marina rehefa tonga mambran'ny fianakavian'Andriamanitra ny tsirairay, [...] hikatsaka izay hahafaly ny tsirairay ao an-tokantrano. — CG, 143